Maleyzia oo dowladda Masar u gacan gelisay dhalinyaro kasoo horjeeda maamulka Siisi. – Shabakadda Amiirnuur
March 7, 2019 6:24 am by admin Views: 29
Dowladda Maleyzia ayaa u dhiibtay maamulka dalka Masar, dhowr qof oo kamid ah dadka maamulkaas ugu xukuman dil toogasho ah, kuwaas oo mudooyinkii u dambeeyay ku sugnaa wadankaasi Maleyzia.
Afarta ruux ee sida rasmiga ah loo xaqiijiyay in loogu gacan geliyay maamulka Siisi ee dalka Masar waxay kala yihiin Muxamed Cabdil-caziiz, Cabdullaahi Muxamed, Cabdi-raxmaan Cabdil-caziiz iyo Cazmi As-sayid Muxamed.
Dowladda Maleyzia ayaa ku wargelisay qareennada u doodaya raggan iney u tarxiishey magaalada Al-Qaahira ee caasimadda Masar, waxaana dhamaan ragga la tarxiilay horey uu maamulka Siisi ugu xukumey dil toogasho ah.
Wasiirka waxbarashada ee dowladda Maleyzia oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa shaaca ka qaaday in weli aan la tarxiilin dhalinyarada Masaarida ah, isagana uu la xiriiray wasiirka arimaha gudaha, wuxuuna sheegay in arinkan uu aad uga war heyn doono.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa baaq u jeediyay ra’iisul wasaaraha Maleyzia Mahaatiir Mxamed, iyagoona ka codsaday in go’aankan laga laabto ama dhalinyaradan loo tarxiilo wadamo kale oo aan Masar ahayn.
Arintan waxay kusoo aadeysaa, iyadoo bilo kahor dowladda Turkiga ay nidaamka Masar u gacan gelisay wiil dhalinyaro ah oo ka tagay Muqdihso, oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbuul.
Muxamed Cabdil-xafiid ayaa dhawaan kasoo muuqday maxkamad ku taalla dalka Masar isagoo aad loo jirdiley, islamarkaana indhaha beeley, waxaana suuragal ah in dil toogasho ah lagu fuliyo.
Dowladaha qaar ayaa waxaa ka dhaxeeya waxa waxa loogu yeero iskaashiga la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo loo midoobo beegsashada dadka ahlu diinka ah, laakin waxaa inta badan caalamka mamnuuc ka ah in dowlad ay dowlad kale u dhiibto muwaadin dalkeeda u dhashay.
Dowladda kaliya oo sidaa sameysayna waa tan federalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho taasoo Itoobiya u dhiibtay muwaadiniin Soomaaliyeed.